Qoor-qoor, Lafta-gareen iyo Guud-laawe oo ku shiraya Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-qoor, Lafta-gareen iyo Guud-laawe oo ku shiraya Muqdisho
Madaxweynayaasha Maamullada taabacsan Farmaajo ee Galmudug, Koofur-Galbeed iyo HirShabeelle ayaa maanta kulan ku leh Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoor-qoor’ ayaa maanta qado sharaf guriga uu Caasimadda ka degen yahay ugu sameeyay Madaxweynayaasha Maamullada Koofur Galbeed iyo HirShabeelle, Cabdicasiis Xasan Maxamed ‘Lafta-Gareen’ iyo Cali Cabdullaahi Xuseen ‘Guud-laawe’.
Saddex-daan Madaxweyne oo lagu xagliyo in ay heshiis kula yihiin Farmaajo, baal maridda sharci ee uu caanka ku yahay, ayaa ku fashilmay waan-waan ay dhawaanahaan wadeen oo ay ugu kala dab qaadayeen Mucaaradka iyo Madaxtooyada, taas oo uu garwadeen ka ahaa Madaxweyne Qoor-qoor.
War dhawaan ka soo baxay Madaxtooyada Galmudug ayaa lagu yiri, “Madaxweynaha Dowlada Galmudug Mudane, Ahmed Abdi Kaariye ayaa casuumaad qado sharaf ugu sameyay hoyga uu ka deganyahay magalada Moqdisho madaxweynayasha koonfur Galbeed Madaxweyne Abdi asiis Hasan Mohomed Lafta gareen iyo Madaxweyne Hirshabelle Mudane Ali Abdulahi Husien Guudlawe”.
Qoor-qoor, Lafta-gareen, iyo Guud-laawe, oo dhamaantood uu Farmaajo ku fariisiyay kursi dhiig leh ayaa ka wada hadlay xaaladaha ku xeendaaban doorashooyinka, iyo is baddallo la filyo in ay ka yimaadaan dhanka Farmaajo, oo iyaga aysan dan ugu jirin, sida ay ku warramayaan, ilo xog ogaal ah oo ka tirsan Madaxtooyada Galmudug.
Madaxweynayaashaan, ayaa si cad u dayacay maamulladii ay madaxda ka ahaayeen, waxayna kursiga ay ku fadhiyaan ugu adeegaan Farmaajo oo doonaya inuu qori caaraddiis ku sii joogo kursiga, ama qaab boob ah ugu soo laabto mar labaad.